Dagaalkii Gobolka Gedo,Oo Saraakiil Caan Ah Ay Hogaaminayeen & Warkii Shabaab Oo Noqday… | Baahin Media
Dagaalkii Gobolka Gedo,Oo Saraakiil Caan Ah Ay Hogaaminayeen & Warkii Shabaab Oo Noqday…
Wararkii ugu dambeeyay dagaal xoogan oo ka dhacay tuuladda Hareer-tuur ee u dhaxeysa degmada Balad-Xaawo iyo deegaanka tuulo Barwaaqo ee gobalka Gedo.
Ciidamo ku heyb ah Nabadoon lagu dilay Gedo ayaa weerar ku qaaday tuuladda Hareer-tuur oo ay ku sugan yihiin Ciidamada Al Shabaab, waxaana halkaasi ka dhacay dagaal xoogan oo sababay in dhamaan Ciidamadii weerarka qaaday halkaasi lagu wada dilo.
War kasoo baxay Al shabaab ayaa looga hadlay dagaalkasi iyo magacyada saraakiil lagu dilay.
“5 askari ayaan dilnay waxaa mid ah sarkaalkii ciidanka hoggaaminayay kaas oo magiciisa lagu soo koobay Cali Fanax wuxuuna uu kamid ahaa saraakiisha ciidamada maamulka Axmed Madoobe ee sida tooska ah u hoos taga ciidanka itoobiya waxaana sido kale lagu dilay weerarka sarkaal kale oo lagu magacaabi jiray Isxaaq Qeyliyow” ayaa lagu yiri war kasoo baxay Al shabaab.
Ilo xog ogaal ah ayaa xaqiijinaya in ciidamada weerarka qaaday ay gaarayeen ilaa 10 askari oo ku heyb ah Nabadoon dhawaan Al shabaab ay ku gowraceen degmada Balad-xaawo ee gobalka Gedo, balse dhamaan ciidamadaasi weerarka qaaday ayaa la sheegay in dagaalkaasi ay ku wada geeriyoodeen.
Wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegaya xaalada gobalka gedo iney tahay mid kacsan.